युएईमा व्यग्रतापूर्वक पर्खिइएको एउटा क्षण - deshparadesh |सीप, समृद्धि र सुरक्षित बैदेशिक रोजगारीका लागि
युएईमा व्यग्रतापूर्वक पर्खिइएको एउटा क्षण
युनाईटेड अरब इमीरेट्सको बरदुबईस्थित वाफी मलबाट यसो ओड मेथा रोड भित्र छिरे पछी जेम्स विन्चेस्टर स्कूल, ईरानीयन क्लब र पाकिस्तानी एसोसिएसन देखिन्छन । ठ्याक्कै इरानीयन क्लबको पछाडि पट्टी अमेरिकन अस्पतालको आडैमा एउटा भब्य हल छ जसको नाम हो अल नासेर लिजरल्याण्ड ।
हलिवूड र बलिवूडका बिभिन्न अवार्डहरु, बिभिन्न साँस्कृतिक कार्यक्रमहरु, दुनियाका १ नम्बर हस्तीहरुले उपस्थिती जनाईसकेको उक्त आईस रिङ्ग हलमा आउँदो शुक्रबार २३ डिसेम्बरका दिन नेपालका हस्तीहरु देखिनेछन १२० जना बिभिन्न कलाकारहरुको साथमा । कार्यक्रम हो “नेफ्टा अवार्ड” समारोह ।
युएईको नेपाली ईतिहासमा अहिलेसम्मको भब्य कार्यक्रम नेफ्टा अवार्ड समारोह सम्पन्न हुँदैछ । नेपाल चलचित्र प्राबिधिक संघको आयोजनामा हुने उक्त समारोहमा नेपालका नेपाली चलचित्रका हस्ती नीर शाह, महानायक राजेश हमाल देखि सुपरहिट चलचित्र छक्कापञ्जाका तथा चर्चित हाँस्य कलाकारहरु दीपकराज गिरी र दीपाश्रीको उपस्थिती रहनेछ । अहिलेको युवा पुस्तामा नाम चलेका पल शाह देखी नायिका प्रियंका कार्कीलाई दर्शकले देख्नेछन । अभिनयमा पोख्त छक्कापञ्जाका नायक दयाहाङ राईदेखि धुर्मुस र सुन्तलीलाई युएईका नेपालीहरुले एउटै रङगमञ्चमा भेटिनेछन ।
केही महिना अघि दुबईस्थित कम्युनिटी डेभलपमेन्ट अथोरिटी (सिडिए) ले पुनः एक सुचना प्रकाशित गरी युएईमा रहेका सम्पूर्ण संघसंस्थाहरु दर्ता हुनै पर्ने नियमलाई स्मरण गराएको थियो । सो नियम २०११ देखी नै लागु भए पनि नेपालीको कानसम्म भने २०१६ को सेप्टेम्बरमा मात्र पुग्यो । त्यो बेलासम्म युएईमा नेपालीहरुको ८० वटाको हाराहारीमा संघसंस्थाहरु मैदानमा छरप्रस्ट थिए । प्रत्येक शुक्रबार दुबईमा गोडा चारएक कार्यक्रमहरु भईरहन्थे । वरिष्ठ समाजसेवी देखी कनिष्ठ समाजसेवी र वरिष्ठ पत्रकार देखी कनिष्ठ पत्रकारसम्मलाई कता जाउँ कता नजाउँ हुन्थ्यो । सेप्टेम्बरको पहिलो हप्ता तिर सिडिएले नियममा कडाइ गरेको समाचार देश परदेश लगायत अन्य सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन भएपछि प्रायः संघसंस्थाहरु भूमिगत जस्तै भएका छन । संघसंस्थाका बैठक बाहेक कार्यक्रमहरु लगभग बन्द भएका छन ।
त्यसैले रमाईलो गर्ने दर्शक देखि अतिथी बन्ने समाजसेवीसम्म र शिकारु देखि कृयाशिल पत्रकारहरुलाई पनि शायद उकुसमुकुस भएको हुनुपर्छ । तर एक जना पत्रकार भन्छन्ः के को उकुशमुकुस हुनु सर, क्या राम्रो भएको छ । किन ? मैले सोधेंः दिनभरी पिकिनिक हुन्छ, नाचगान हुन्छ बेलुका आए पछी समाजसेवीहरु समाचार छापिदिनु पर्‍यो भन्छन । खाएको र नाचेको पनि के समाचार बनाउनु जस्तो लाग्थ्यो । नबनाए समाजसेवी साथी रिसाउने । अहिले भने राम्रो भएको छ । त्यो समय अब यहाँको समस्याको बारेमा लेखेर खर्चिनेछु, उनले जवाफ फर्काए ।
हो त्यै उकुशमुकुसलाई फुत्त पोखिदिने ठाउँ बन्नेछ आगामी डिसेम्बर २३ तारिक शुक्रबार । 'रातो टिका निधारमा टलक्कै टल्कियो' भन्दै राजेश हमाल र करिश्मा मानन्धरको बेजोड नृत्य हेर्न पाउनेछन युएईबासी नेपालीले । शायद “तीनपाते डाँडा काटेर कहाँ जान लाग्यो” भन्दै राजेश हमालले करिश्मा मानन्धरलाई समात्दै उनको पहिलो सिनेमा युगदेखि युगसम्मको गीत गाउँदै स्टेजमा उत्रनेछन । “बिजुलीको तार तार.....” भन्दै मुरली बोकेर महानायक करिश्मासँग मैदान उत्रनेछन । “आफ्नै गाउँ फर्की आएँ” भन्दा बिदेशिएका हाम्रा हातका रौ ठाडा हुनेछन । नीर शाह आफ्नो ओजपूर्ण ब्यक्तित्व र बेजोड अभिनय सेतो बाघमा झै बाघ बनेर गर्जनेछन । छक्कापञ्जाका दीपकराज गिरी र दीपाश्रीको बैदेशिक रोजगारले निम्त्याएको सामाजिक बिखण्डनको तितोसत्य हेर्ने अर्को मौका फेरी नपाउन सक्छन युएईबासी नेपालीले ।
'खै के खै के' भन्दै धुर्मुस स्टेजमा उत्रिदा युएईका नेपालीहरुले पक्कै पनि गज्जव रमाइलो अनुभूति गर्नेछन् । सिन्धुपाल्चोकको गिरन्चौरमा बस्ती निर्माणमा धुर्मुस र सुन्तलीलाई युएईबासीले संस्थागत तथा ब्यक्तीगत तवरले गरेको आर्थिक सहयोगलाई उनले सम्झनेछन । ढुङ्गा बोक्दा, खन्दा, पर्खाल लगाउदै गरेको तस्बीरहरु सामाजिक सञ्जालमा देखेका युएईबासीले उनको हातमा उठेका ठेला निको भए नभएको सोध्नेछन । मस्कदै गरेकी सुन्तलीसँगको बेजोड हाँस्यब्यङ्य प्रस्तुतीसँगै नेपालीहरुले गडगडाहट ताली पड्काउनेछन ।
अर्कोतिर सुर्के थैलीको मज्जा नै बेग्लै हुनेछ । नायिका प्रियंका कार्कीले “पटुकीमा सुर्केको सुर्के थैली खै ?” भन्दै सोध्नेछिन । अहिलेका जल्दाबल्दा नायक पल शाह, अनुपबिक्रम शाही, नायिका मलिना जोशी, मोडल माला लिम्बुका लोभलाग्दा प्रस्तुती हेर्ने अर्को अवसर फेरी अर्को कहिले आउला र ? त्यति मात्रै हो र ? हाम्रो भाषा र सँस्कृतिप्रतिको माया देखाउने राष्ट्रबादलाई भुइँभरी पोखिदिने दिन यो भन्दा अर्को कुन हुन्छ र युएईमा ?
नेफ्टा अवार्ड के हो ? कसले आयोजना गर्दैछ ?
नेपाली चलचित्रमा काम गर्ने प्राबिधिकहरुको संस्था हो नेपाल फिल्म प्राबिधिक संघ (नेपाल फिल्म टेक्निकल एसोसिएसन) । यसले चलचित्रको निर्माणका बिबिध पक्षमा खट्ने प्राबिधिकहरुलाई हरेक बर्ष उनीहरुले गरेको कामको आधारमा पुरस्कृत गर्ने गरेको छ । यसअघि मलेसिया, हङकङ, कतार हुँदै ९ औ अवार्ड दुबईमा हुँदैछ । यसपालीको अवार्डमा बिक्रम सम्बत २०७२ सालमा बनेका र चलचित्र प्राविधिक संघको आह्वान बमोजिम दर्ता भएका ४३ चलचित्र बीच ३१ विधामा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ, त्यो पनि विश्वको सुन्दर सहर दुबईमा।
प्राबिधिक संघले बिदेशमा रहेका नेपालीहरुको चाहना बमोजिम नेफ्टा फिल्म अवार्डलाई व्यवस्थित तथा भब्य बनाउन युएईका लागि कन्सेप्ट भिजन फिल्म प्रोडक्सन तथा वितरक कम्पनी र स्पेक्ट्रम एडभरट्राईजिङ एण्ड मिडिया कन्सल्टेनसँगको सहकार्यमा गरिरहेको छ । कन्सेप्ट भिजन फिल्म प्रोडक्सन तथा वितरक कम्पनीका सञ्चालकहरु युएईको नेपाली समाजमा चिरपरिचित अनुहारहरु शालिक सुबेदी, राजन अधिकारी र सुवास सिंह ठकुरी (अनिश) रहेका छन । युएईको ईतिहासमा पहिलो पटक नेपाली चलचित्रलाई युएईका बिभिन्न शहरहरुमा सफलता पूर्वक प्रदर्शन गरिसकेको आयोजकले नेपाली चलचित्रको यति ठुलो अवार्ड समारोहको आयोजना युएईमै गरेर नेपाली सिनेमालाई ठुलो गुण लगाएका छन ।
हलिउड लगायत बिभिन्न ठूलाठूला इभेन्टको आयोजना गरिरहेको युएईको सेभेन स्टार ईभेन्ट एण्ड प्रोडक्सन कम्पनीले यो कार्यक्रमको जिम्मा लिएको छ । यसैबाट पनि यो अवार्ड समारोह शायद अहिलेसम्मको उच्चस्तरको, अन्तराष्ट्रिय गुणस्तरको हुनेमा हामी दर्शक ढुक्क हुन सक्छौ ।
आयोजकले युएईमा रहेका हरेक संघसंस्थाहरु सँग सहयोगको अपेक्षा गरेको छ । उनीहरुसँग पटक पटक भेटघाट गरी छलफल गरेको छ । कार्यक्रमलाई ब्यवस्थित र भब्य बनाउन गर्नु पर्ने उपायहरु सबै अवलम्बन गरेको छ । 'हामीले पैसा हेरेका छैनौ, नेपाली कला, सँस्क्रिति र सिनेमालाई विश्वमा कसरी चिनाउने भन्नेमा मात्र लागि परेका छौ ।' कन्सेप्ट भिजनका शालिक सुबेदीले भने । आयोजकका अनुसार उक्त कार्यक्रम हेर्न देशी बिदेशी गरेर ३,००० जना दर्शक आउनेछन । त्यसो भए युएईको नेपाली ईतिहासमा अर्को ईतिहास रचिने पक्का भो ।
त्यसैगरी बिभिन्न संघसंस्थाहरुले पनि यति ठुलो महोत्सव युएईमा हुनुलाई गौरवको रुपमा लिएका छन । संघसंस्थाहरुले भएसम्मको बल लगाएर सहयोग गर्ने बाचा गरेका छन । त्यो बाचा कति र कसरी पुरा हुने हो हेर्नलाई २३ तारिक नै पर्खनु पर्नेछ ।
मैले पनि डिसेम्बर २३ तारिक शुक्रबारका दिन हुने यो कार्यक्रम हेर्न लागि मेरा ब्यक्तिगत योजनाहरु सबै थाँती राखेको छु । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एक पटक भनेको याद अझै ताजा छ, 'जिन्दगीमा एक पटक पनि गैंडा नहेरी मरियो भने के जीवन ?' म पनि भन्छु: 'दुबईमा रहेर पनि यत्रो ठुलो अवार्ड नहेरी बसियो भने के जिन्दगी ?' ९ औ सँस्करणको यो अवार्ड हेर्न अन्त कहाँ जानु ? दुबई नै आउनु पर्छ” तपाईं पनि आउने हैन त अल नासेर लिजर्ल्याण्ड ?
मन्सीकुमारले मलेसियामा भोगेको सास्ती
काठमाडौं, पुष २- डेढ बर्षअघि रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका धनुषाको ढल्केवरका मन्सीकुमार महतो एक फर्निचर कारखानामा काम गर्दथे ।...
मलेसियामा विदेशी कामदारको तलव काट्ने निर्णयको विरोधमा उत्रिए ट्रेड युनियन र अधिकारवादीहरु
काठमाडौं, पुष १- मलेसियामा श्रमिकको न्यूनतम तलवबाट २० प्रतिशत कटौति गरेर स्वदेश फर्किने बेलामा मात्र फिर्ता दिने...
मलेसियामा २० प्रतिशत तलव कट्टा गर्ने सरकारको प्रस्ताव, श्रमिक मर्कामा पर्ने
क्वालालम्पुर, मंसीर २९- मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयले यहाँ कार्यरत विदेशी श्रमिकको तलवको २० प्रतिशत रोजगारदाताले कटौति गर्न...
सबैले भन्थे- ‘निधार ठूलो छ तेरोभाग्यमानी छस् !’ कम्पनीमा भाग्य अजमाउन जाँदा र आउँदाकाँचका घरहरूमा हेर्छु फर्की फर्कीआफ्नो आकृति ! सौ मन्जिला भित्ताहरूमा रंग पोतिरहँदा पर..रेगिस्तानको...